भिडियो – Eps Sathi
बुवा बितेपछि आमा अरुसगै पोइला गइन, एक्लै घर सम्हाल्दै, रुदै भोकभोकै (हेर्नुस् भिडियो )
बुवाको हात समातेर हिड्ने बेलामा बुवाले संसार छाडे र बुवा बितेको केही समयमानै आमा अरुसगै पोइला गइन। पोइल गएकि आमा छोराछोरीलाई भेट्न आइन, भेट्न मात्रै आइनन आमाले एक सय पचास रुपैया दिएर पनि गइन। कस्ले देख्छ यी छोराछोरीको आँसु आखिर जस्ले देख्नु पर्ने उसैले छोडेर गयो। जन्म दिने आफ्नै आमाले समेत छाडेर गएपछि आखिर कसले देला र साहारा। बुवा अत्याधिक म दिरा पिउने भएसगै त्यसैको कारण अन्तत म र्न पुगे। कलिलै उमेरमा नै उनले ठूला मान्छेको जस्तो घर व्यवाहार सम्हाल्नुपर्ने बाध्यता आइपर्यो। रहरले होइन बाध्यताले नै उनलाई बाँध्न पुग्यो। उमेरको हिसाबमा पनि एकदमै कलिलि नानू यसरी यस्तो जाडोको समयमा पनि बिहान सवेरै उठेर घरको खाना पकाउने भाडा माझ्ने घर पुछ्ने देखि सम्पुर्ण काम आफै गर्छिन्। कोहि नभएकाको भगवान हुन्छन भन्थे तर यहाँ किन त्यसो भएन? यति साना कलिला बालखहरुलाई किन यति ठूलो पिडा? भगवान उनिहरुमाथि दया
सोजु खाएर बोत्तल बाटोमा झट्याएर भाग्ने एक कोरियन प्रहरीको नियन्त्रणमा
दक्षिण कोरियामा एक ५० बर्षिय कोरियनले सोजु खाएर खाली बोतल बाटोमा फालेपछि उनलाई प्र'हरीले प'क्राउ गरेको छ। ख्यङसाङबुक्दो प्रदेशको आनदोङमा रहेको यङहो नदिको पुलमा ति ब्यक्तिले सोजु खाइसकेको खाली बोतल बाटोमा झट्याएका थिए। आनदोङ प्र'हरीले आज दिएका जानकारी अनुसार त ५० बर्षका पुरुषलाई सार्वजनिक सम्पतिमा क्षति पुर्याएको तथा अ'बैधानिक रुपमा सवारी साधन प्रयोग गरेको अ'भियोगमा प'क्राउ गरिएको जानकारी दिएको छ। ५० बर्षिय ति ब्यक्तिले बाटोमा ४ वटा खाली सोजुका बोतल झट्याएका थिए। उनले ब्यस्त सडकमा साँझ ५ बजे ५९ मिनेटमा सोजुका बोतलहरु बाटोमा झट्टि हानेको बुझिएको छ। आनदोङ ओक्यादोङमा उनले बाटोमा यि बोतलहरु फालेर मोटरसाइकल चढि भागेका थिए। उनले खाली बोत्तल बाटोमा झटयाइरहेको समयमा त्यही बाटो हुँदै गइरहेका अर्का एक सामान डेलिभरी गर्ने मोटरसाइकलमा सवार ब्यक्तिले उक्त कुराको प्र'हरीमा रि'पोर्ट गरेका थिए। डेलिभ
Jan112022 by AdminNo Comments
नेपाली गीत गाएर भाइरल अफ्रिकन युवती भन्छिन्, ‘विवाह गर्न नेपाली केटा खोज्दैछु, (भिडियो हेर्नुहोस)
विउन्सी अफ्रिकन हुन् । तर अहिले उनी नेपालमा निकै भाइरल छन् । नेपाली अलिअलि बोल्ने उनी गीत पनि गुनगुनाउँछिन् । नेपाली बोल्ने र नेपाललाई मन पराएर माया गर्ने धेरै विदेशीहरु छन् नेपालमा । तीनै मध्यकी एक हुन् विउन्सी। उनी अफ्रिकन हुन् । लकडाउनको समयमा नेपालमै थुनिएकी विउन्सीले नेपाली बोल्ने कोशिष गर्छिन । नेपाली बोल्ने मात्र नभई उनले नेपाली लोक गीतहरुपनि उत्तिकै राम्रो लयमा गाउने को’शिष गर्छिन । उनको बोली र गीतले सबैलाई आर्कषित गदर्छ। लकडानका कारण आफ्नो देश फर्कन नपाएकी विउन्सीलाई नेपालको मायाले । तानेको उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्ल कडाउनको समयमा म यता बस्न बाध्य भएँ । र यही लकडाउनकै समयले मलाई नेपाल र नेपालीप्रतिको मायामा अ(ल्झायो । मलाई नेपालीसंगै बिहे गर्न मन छ । मलाई नेपाली खाना मन पनि पर्छ। नेपाल र नेपाली प्रतिको प्रेमलाई बताउँदै विउन्सीले आफुलाई मन पर्ने लोक गीत पनि गाएर सुनाईन् ।
सपिङ सेन्टरको पाँचौ तल्लामा रहेको पार्किङबाट ड्राइभरले भित्ता फोरेर झारे ट्याक्सी, चालकको गयो ज्यान (भिडियो सहित)
दक्षिण कोरियामा एउटा सुपरमार्केटको पाँचौ तल्लाबाट ट्याक्सी खसेर दु'र्घट'ना भएको छ। उक्त ट्याक्सी सुपरमार्केट बिल्लिङको पाँचौ तल्लामा रहेको पार्किङमा राखिएको थियो। कोरियाको दोश्रो ठूलो शहर बुसानमा रहेको हाेमप्लस सुपरमार्केटको पाँचौ तल्लको पार्किङबाट ड्राइभर सहितको ट्याक्सि भित्तो भोरेर तल बाटोमा खसेको हो। आज अर्थात डिसेम्बर ३० तारिखमा घटेको उक्त घ'ट'नामा परी ट्याक्सी चालकको ज्या'न गए'को छ भने अन्य ७ जना घाइते भएको येन्जे प्र'ह'री चौ'की बुसानले जानकारी दिएको छ। मध्य दिउँसो करिब १२ बजेर ३० मिनेटमा होमप्लस सुपरमार्केटको पाँचौ तल्लाबाट ट्याक्सी भित्ता नै फोरेर तल झरेको थियो। उक्त ट्याक्सीमा रहेका चालकको ज्या'न ग'एको छ। ट्याक्सी बाटोतिर खस्दा रोडमा गुडिरहेका ८ वटा तथा बाटोनजिकै पार्किङ गरि राखिएका ६ गरी १४ वटा गाडीमा क्ष'ति पुगेको छ। त्यसैगरी ७ जना घा'इते समेत भएका छन भने घा'इ'ते सबैलाई अस
मानिसलाई आफ्नो कला देखाउन केहि पनि कुराले रोक्न सक्दैन। शारिरीक रुपमा अपाङ्गता भएतापनि गाउने कला भएकी एक महिलाको कुरा आज लेख्दैछौं। मनिषा परियारले आफू जन्मिकएकव ७ महिनामै दुबै खुट्टा गुमाउनुपर्यो। जन्मिएको सात महिनामा नै दुबै खुट्टा गुमाएकि २३ बर्षिय मनिषाले जीवनमा धेरै संघर्ष गर्नुपर्यो। अर्घाखाँचीकि २३ बर्षिय मनिषा परियार जन्मिएक सात महिनामानै आगोमा परिन। दैबको लिला उनले आफ्नो दुबै खुट्टा गुमाउन पर्यो। ११ बर्षको उमेरसम्म उनी आफ्नो घर अर्घाखाँचीमा नै बसिन , पहाडको बाटो हिड्न एकदै गाह्राे भएपछि उनी अहिले कपिलवस्तुको इमिलियामा बस्दै आएकि छिन्। आर्थिक रुपमा एकदमै नाजुक अवस्था भएकाले उनले आजभन्दा तीन बर्ष अगाडि डेढ लाख रुपैया ऋण नै खोजेर कृतिम खुट्टा हालिन। आफूलाई केहि सहज होला कि भनेर हालेको त्यहि कृत्रिम खुट्टा हालेको पैसा अहिलेसम्म पनि उनले तिर्न सकेकि छैनन्। त्यहि ऋण लिएको पैसा तिर्
सउल दूधको यो बिज्ञापन जसले पायो यति धेरै गाली, अन्तिममा माफी नै माग्नुपर्यो, हेरौं कस्तो रहेछ त?
दक्षिण कोरियाको सबैभन्दा ठूलो दूध कम्पनी 'सउल उयु' फेरि बिबादमा तानिएको छ। केहि दिन अघि कम्पनीले प्रसारण गरेको आफ्नो कम्पनीको विज्ञापनका कारण विवादमा तानिएको हो। कम्पनीले बनाएको बिज्ञापनमा महिलाहरु गाईका रुपमा परिवर्तन भएको देखाएपछि कोरियाभर यसको विरोध भएको हो। अत्याधिक विरोध हुन थालेपछि अन्तत कम्पनीले उक्त बिज्ञापन आफ्नो युट्युब च्यानलबाट हटाएको छ। गत नोभेम्बर २९ तारिख सउल उयुले आफ्नो अफिसियल युट्युब च्यानलमा एक बिज्ञापन पोष्ट गरेको थियो। "द आइडेन्टिटी द्याट वाज हिडन अन्डर द भेल....सउल अर्गानिक दूध" शिर्षक दिएर उक्त भिडियो पोष्ट गरिएको थियो। भिडियोको तल कम्पनीले भिडियोको रिभ्यू गर्नेहरुलाई गोलाप्रथाबाट पुरष्कार समेत दिने बताएको थियो। तर भिडियो पोष्ट हुने बितिकै यसको विरोध हुन सुरु भयो। बिज्ञापनको सुरुवातमा एक पुरुष क्यामेरा हातमा लिएर जङ्गलमा डुलिरहेका हुन्छन। जङ्गल डुल्ने क्रममा भि
दक्षिण कोरियामा मोनोरेल दु'र्घट'नामा परेको छ। कोरियाको ख्यङसाङनामदो प्रदेशको थोङयङसी, थोङहाङरीको योक्जीम्यनमा आज अर्थात नोभेम्बर २८ दिउँसो २ बजेर १ मिनेटको समयमा गुडिरहेको मोनोरेल लिकबाट उ'छिट्टि'एर तल ख'सेको हो। मोनोरलेल दु'र्घट'नामा केहि ब्यक्तिहरु घा'इ'ते भएका छन। यात्रा गरिरहेका पर्यटकहरुमध्ये ८ जना लाई उ'पचा'रका लागि नजिकैको अ'स्पता'लमा लगिएको छ। उनिहरु ५० देखि ७० बर्ष उमेरका रहेका छन। ८ जनामध्ये धेरैको खुट्टा भाँ'चि'एको छ भने शरिरका अन्य भागमा समेत चो'ट लागेको बताइएको छ। चोट लागि नजिकैको अ'स्पता'ल लगिएका ८ जना नै सु'रक्षित रहेका र उनिहरुलाई त्यस्तो ठूलो चो'ट भने लागेको छैन। त्यस ठाउँमा पुगेका अ'ग्नि नि'यन्त्रकहरुका अनुसार स्टेशन प्रवेश गर्नै लागेको मोनोरेल लिकबाट उ'छिट्टि'एर चार पाँच मिटर तल ख'सेको थियो। मोनोरेल ख'सेको स्थान नजिकैको स्टेशनको प्रवेस गर्ने मार्ग थियो। यो मोनोर
कोरियामा खिसुक्सामा ढोका नलगाई सुत्दा कम्पनीको खोङजाङनिम छिरेर….
कोरियाको प्रत्येक कम्पनीमा आनजन छेइल अर्थात सु'र'क्षा पहिला भनेर लेखेको हुन्छ तर तपाईं सुत्ने कोठा कतिको सु'र'क्षा छ नि। जस्तै बलियो र बाठो नि म'स्त निदाको बेला क'मजोर हुन्छ, यस्तो बेला कुनै दु'स्मनले आ'क्रम'ण गरेमा जो कोहि को पनि ज्या'न सक्छ। प्रसग यस्तै एउटा घ'ट'नाको हो। गत सोमबार वोन्जु मुनमाकमा अवस्थित मेरो भाईको कम्पनिको खिसुकसामा सबै जना राती मस्त निदाको बेला कारखानाको मेनेजर सुटुक्क छिर्दछन। भाईहरु जहिले ढोका खुल्ला गरि सुत्ने गर्दा रहेछन। त्यस दिन नि ढोका खुल्लै गरि सुतेका रहेछन। हातमा बेसबल को ब्याट लिएर पा'गल सरि मातेर छिरेको त्यो खोङ्जाङनिमले पुरानो रि'स तथा साजाङको रि'स सम्झिदै भाईहरुलाई धमाधम आ'क्रम'ण गरेछन। कसो कसो भाईहरुको त्यो दिन बच्ने दिन रहेछ, सबै जना हो'हल्ला भएर जर्याक जु'रुक्क उठि हाले र थप आ'क्रम'ण बाट बचे तर एक जना भाईलाई त निकै आ'क्र'म'ण गरिहालेछ। भाईहरुले भन
नेपाल एअरलाइन्सले आफ्ना जहाज सिधा नजाने देशहरुमा समेत उडान संजाल थपेको छ। एयरलाइन्सको सिधा उडान नहुने गन्तब्यसम्म पनि अब नेपाल एयरलाइन्सकै टिकटबाट यात्रुले उडान गर्न सक्ने गरि व्यवस्था मिलाएको छ। नेपाल एयरलाइन्स र विभिन्न वायुसेवा कम्पनीबीच द्विपक्षीय सम्झौता गरिएको छ। जसअनुसार अब यूरोपका विभिन्न शहरहरु, अष्ट्रेलियाको सिड्नीदेखि दक्षिण कोरियाको सउलसम्म यात्रा गर्न सकिने नेपाल एयरलाइन्सकी प्रवक्ता करिश्मा श्रेष्ठले जानकारी दिइन। सम्झौतासँगै एक अर्का वायुसेवाका सेक्टरमा यात्रुले सहजै सेवा लिन सक्ने भएका छन्। यी सम्झौताबाट यूरोप, अष्टे्रेलियाको सिड्नी, दक्षिण कोरियाको सिओल, कुवेत र बहराइनमा काठमाडौंबाट उडानको टिकट लिइन सकिने भएको छ। सकेसम्म कम ट्रान्जिट समय राखेर यस्तो सम्झौता गरिएको समेत श्रेष्ठको भनाइ छ। यसले निगमलाई थप आय हुने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाल एयरलाइन्सको साख बढ्ने अ
प्रियंका चोपडाको इन्गेजमेन्टको औंठीको मूल्यमा किन्न सकिन्छ आलीशान घर
अभिनेत्री प्रियंका चोपडाको विवाह कति शानदार तरिकाले भएको थियो, यो त सबैलाई थाहा छ। विवाहको पहिरनदेखि औंठीसम्म प्रियंकाले निकै महँगा सामान लगाएकी थिइन्। हालै एक अन्तरवार्तामा प्रियंकाले उनको इन्गेजमेन्ट गर्दाको औंठीको मूल्य २.१ करोड भारु भएको बताएकी थिइन्। अन्तरवार्तामा प्रियंकालाई उनको सबैभन्दा मूल्यवान गहना कुन हो भनेर सोधिएको थियो। प्रश्नमा जवाफ दिने बेलामा उनले हाँस्दै भनेकी थिइन्, ‘यदि मैले मेरो इन्गेजमेन्टको औंठीको नाम लिइनँ भने मेरा श्रीमान् निक जोनसले मलाई मार्नेछन्। हुन त यो औंठीसँग मेरा थुप्रै याद जोडिएका छन्, त्यसैले पनि म यसैको नाम लिन चाहन्छु।’ रिपोर्टका अनुसार निक जोनसले आफ्ना साथीको मद्दतले प्रियंकाका लागि औंठी लिएका थिए। प्रियंकाले आफ्नो इन्गेजमेन्टको औंठी टिफनीको हुनुपर्छ भनेको निकले सुनेका थिए ।योसँग उनको पिताको निकै गहिरो सम्बन्ध पनि भएको निकले बताए। उनले भने, ‘प्रि